“Ná Nnipa Bebree Tan Me” | Bible Tumi Sesa Nnipa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ná Nnipa Bebree Tan Me”
Waldo Moya anom asɛm
AFE A WƆWOO NO: 1978
TEBEA A NA ƆWOM: NÁ ƆPƐ NTƆKWAW PAA
Chile man no ahenkurow Santiago na metena nyinii, na na nnubɔne, akobɔfo kuw ne nsɛmmɔnedi ahyɛ yɛn mpɔtam hɔ ma. Midii mfe anum no, obi kum me papa. Efi saa bere no, me maame ne papa bi a na ne tirim yɛ den kɔtenae, na ɛreyɛ ara ni na ɔrebo me ne me maame. Ɛnnɛ yi nyinaa mekae a, etumi ma meyɛ basaa.
Merenyin no nyinaa na suban bɔne a mihu no bi rewura me mu, enti mebɛpɛɛ ntɔkwaw paa. Ná mitie nnwom a ano denneennen a wɔfrɛ no “heavy-metal.” Bio nso na mewe nsa, na ɛwom ara a na menon nnubɔne nso. Ná metaa ne wɔn a wɔtɔn nnubɔne ko ntɔkwaw, na na wɔrepɛ me akum me mpo. Ɛda bi de, akobɔfo kuw bi a wɔne m’ani nhyia bɔɔ paa sɛ owudifo bi a ne ho yɛ hu mmekum me. Ɔwɔw me sekan, nanso minyaa me ho tetewee. Ɛda bi nso nkurɔfo bi a wɔtɔn nnubɔne twee tuo sii me so yɛe sɛ wɔbɛsɛn me, nanso anyɛ yiye.
Afe 1996 mu no, mihuu ɔbea bi a m’ani gye ne ho. Ne din de Carolina, na yɛwaree afe 1998 mu. Bere a yɛwoo yɛn babarima a odi kan no, na misuro sɛ me koko bɔne no nti, anhwɛ a mɛyɛ sɛ me maame kunu no aboro me yere ne me mma. Enti mekɔɔ asoɛe bi a wobetumi aboa me ama madi me haw no so. Wɔkyerɛɛ me ano aduru maa me ɛho afotu nanso ankosi hwee efisɛ biribi ketewa bi a na me bo afuw denneennen. Minyaa adwene sɛ mempɛ sɛ mehaw m’abusua bio, enti saa na ɛte de a, mekum me ho mmom. Nanso anyɛ yiye.
Ebesi saa bere no nyinaa na minnye nni sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ, nanso afei de, na mepɛ sɛ migye no di. Enti mede me ho bɔɔ asɔre bi kakra. Saa bere no nso na me yere ne Yehowa Adansefo resua Bible. Ná mikyi Adansefo no kɔkɔkɔkɔ, enti na metaa teateam gu wɔn so didi wɔn atɛm pɔtɔɔ. Nanso nea mede yɛɛ wɔn nyinaa mu no, wɔn bo amfuw da, na ɛyɛɛ me nwonwa paa.
Ɛda bi, Carolina ka kyerɛɛ me sɛ mimmue me Bible nkɔ Dwom 83:18 na menkenkan. Ɛhɔ ka no pefee sɛ Onyankopɔn din de Yehowa. Ɛyɛɛ me nwonwa, efisɛ m’asɔre mu de, na wɔka nyame bi ho asɛm nanso na wɔmmɔ Yehowa din. Afe 2000 ahyɛase na me nso, Adansefo no fii ase ne me suaa Bible.
Bere a migu so resua ade no, mihui sɛ Yehowa yɛ mmɔborɔhunu Nyankopɔn a ɔde bɔne firi, na ɛkyekyee me werɛ paa. Wohwɛ Exodus 34:6, 7 sei a, Bible ka sɛ Yehowa yɛ “Onyankopɔn mmɔborɔhunufo ne ɔdomfo, nea ne bo kyɛ fuw na n’adɔe ne ne nokwaredi dɔɔso. Oyi n’adɔe adi kyerɛ nnipa mpempem, na ɔde mfomso ne mmarato ne bɔne firi.”
Mihui sɛ Yehowa yɛ mmɔborɔhunu Nyankopɔn a ɔde bɔne firi, na ɛkyekyee me werɛ paa
Ne nyinaa akyi no, na ɛnyɛ mmerɛw mma me sɛ mede nea meresua no bɛyɛ adwuma. Adwene a minyae ara ne sɛ me koko bɔne no de aka hɔ, meyɛ ho hwee a, ɛrenyɛ yiye. Bere biara a ɛbɛba no, Carolina hyɛ me nkuran sɛ memmpa abaw, na ɔkae me sɛ mmɔden a merebɔ nyinaa, Yehowa hu. Edu baabi a na ɛyɛ me sɛ merebrɛ gu, nanso sɛnea ɔboaa me no hyɛɛ me den ma metoaa so sɛ mɛyɛ nea Yehowa pɛ.
Ná Alejandro na ɔne me sua ade, na da koro ɔka kyerɛɛ me sɛ menkenkan Galatifo 5:22, 23. Ɛhɔ ka sɛ Onyankopɔn honhom aba ne “ɔdɔ, anigye, asomdwoe, abodwokyɛre, ayamye, papayɛ, gyidi, odwo, ahosodi.” Alejandro kyerɛkyerɛɛ mu sɛ me ara merentumi nnya saa suban no bi gye sɛ Onyankopɔn honhom kronkron boa me. Nokwasɛm yi a ɔkae no sesaa m’adwene koraa!
Akyiri yi, mekɔɔ Yehowa Adansefo nhyiam kɛse bi. Mekɔe no, nea mihui ma migye toom sɛ mahu nokware som; mihui sɛ wɔatoto biribiara pɛpɛɛpɛ wɔ hɔ, ɛhɔ tew, na obiara ne ne yɔnko bɔ kama. (Yohane 13:34, 35) Mebɔɔ asu February 2001.
Obi a na mepɛ ntɔkwaw no, Yehowa asesa me ama mabɛyɛ asomdwoe nipa. Ná ɛyɛ me sɛ maka atɛkyɛ mu, nanso Yehowa ayi me afi mu. Ná nnipa bebree tan me, nanso ɛnyɛ wɔn mfomso. Seesei de, me ne me yere ne me mma nyinaa resom Yehowa asomdwoe mu.
Nsakrae a mayɛ no yɛ m’abusuafo ne me nnamfo dedaw bi nwonwa paa. Ɛno nti wɔn mu pii ani abegye ho sɛ wobesua Bible. Ɛyɛ akwannya sɛ me nso matumi aboa nkurɔfo ama wɔabehu Yehowa. Sɛ mihu sɛnea Bible mu nokware aboa wɔn ama wɔasesa wɔn abrabɔ no a, m’ani gye paa!